१० सेकेण्डको चुम्बनमा आठ करोड व्याक्टेरिया सर्न सक्ने !
२०७४ फागुन २ बुधबार ००:००:००
बीबीसी। चुम्बन गर्दा नाक एक–आपसमा ठोक्किन्छ कि ठोक्किन्न ? एक हिन्दी फिल्ममा सोधिएको यस प्रश्नको उत्तर चुम्बनको सुख भोग गर्न पाएकाहरुसँग अवश्यपनि होला ।
तर एउटा चम्बन थोरै समय पनि लम्बिए ब्याक्टेरियाको ठूलो समुह शरणार्थी बनेर अर्को व्यक्तिको मुखमा जान्छ भन्ने बारेमा धेरै जसो व्यक्तिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
१० सेकेण्डको एक चुम्बनका दौरान आठ करोड ब्याक्टेरिया एक–अर्काको मुखभित्र जाने गर्दछन् । यो कुनै प्रेमी–प्रेमिकाको जोडीले नभएर नेदरल्याण्डस्का वैज्ञानिकहरुको एक समुहको भनाई हो ।
ती वैज्ञानिकहरुले २१ जोडीमा चुम्बनको तथ्यबारे अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जुन जोडीले दिनमा नौपटक एक–अर्कालाई चुम्बन गर्दछ, उनीहरुमा ब्याक्टेरिया सर्ने सम्भावना अत्याधिक रहने गरेको तथ्य फेला परेको उक्त समुहले बताएको छ ।
अनुसन्धानले मानिसको मुखमा ७ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया करोडौंको संख्यामा हुने गरेको देखाएको छ । जसमध्ये केही ब्याक्टेरियाहरु बढी तीव्र गतिमा सर्ने हुन्छन् ।
नेदरल्याण्ड अर्गेनाइजेशन फर एप्लाइड साइन्टिफिक रिसर्च (टीएनओ) को उक्त समुहले चुम्बनको अनुसन्धान गरिएका जोडीहरु सँग ‘किसिङ ह्याबिट’ का बारेमा कयौं प्रश्नहरु गरेको थियो । उनीहरुलाई गतवर्ष कति पटक एक–अर्कालाई चुम्बन गरियो र अन्तिम पटक ‘लक्ड लिप्स’ युक्त चुम्बन कहिले गरिएको थियो ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो ।
वैज्ञानिकहरुले ती जोडीहरुको जिब्रो र ¥यालको नमूना पहिले नै संकलन गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले १० सेकेण्ड लामो चुम्बन लिइसकेपछि पनि जिब्रो र ¥यालको नमूना लिइएको थियो ।
चुम्बन पछि जोडीका हरेक एक सदस्यलाई ब्याक्टेरिया सजिलै पहिचान हुन सघाउने ‘प्रोबायोटिक ड्रिंक’ सपउन दिइएको थियो । त्यस पछिको दोस्रो चुम्बनका दौरान वैज्ञानिकहरुले कति ब्याक्टेरिया अर्को सदस्यको मुखमा पुग्यो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गरेका थिए । बैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक १० सेकण्ड लामो चुम्बनपछि झण्डै आठ करोड ब्याक्टेरिया सर्ने गरेको तथ्य देखाएका छन् ।
बैज्ञानिक टीमका प्रमुख प्रोफेसर रेमको कोर्ट भन्छन्, “फ्रेन्च किसिंगका माध्यमबाट ब्याक्टेरिया तीव्र गतिमा ठूलो संख्यामा एउटाको मुखबाट अर्कोको मुखमा पुग्दछन् ।’’